Ukhathalelo olupheleleyo - I-Foton Motor Group Co., Ltd.
Iifoto ngokujonga nje
Iprofayile yeshishini esebenzayo yeFoton
Isicwangciso soPhuhliso lwehlabathi
Itekhnoloji ekumgangatho wehlabathi amandla okuyila izinto ezintsha
Ukuthengiswa kwezithuthi eziluhlaza kubekwe kwindawo yokuqala kwishishini iminyaka ilandelelana
Elona tyala lilungileyo
Imbali yamatyala abathengi bayasebenzisana
IITraki ZOMSEBENZI WOKUKHANYA
IITrAKI ZOKUFUNDA NEZOMSEBENZI
AUMAN EST DUMPER
IFOTON U9 / U10
IFOTON C10 / C12 EV
Imiboniso yeeMoto kwimarike
Ukhuphiswano lweemoto lwamanye amazwe
Izinto ezisebenzayo zokumiliselwa, ukuqhuba ukuqhuba kunye nokunxibelelana nabathengi
Iindawo zokubonelela ngeenkonzo ezili-1,485 kumazwe nakwimimandla engama-80
Unikezelo iindawo Global
Ngokusekwe e-Hongkong, i-FOTON yezimali zaphesheya iye yandise ishishini layo kwihlabathi liphela
Wamkelekile ukuba ujoyine iqela lethu
Cofa ukungena ukukhangela okanye i-ESC ukuvala
Inkqubo yenkonzo yehlabathi
Sithembele kwinethiwekhi yokuhambisa umhlaba wonke ukubonelela abasebenzisi ngemveliso esemgangathweni, inkonzo, izixhobo, uqeqesho kunye nenkxaso yezobuchwephesha. UFoton uqalise ngenkonzo “yoKhathalelo lulonke” ngokuthe ngcembe. Ngeziko eli-13 lokuzixhasa ngokwasekhaya lokuhambisa inkxaso, iziko le-12 loqeqesho lwenkonzo yengingqi, ngaphezulu kwe-1500 yenethiwekhi yenkonzo yaphesheya, iFoton iqhubekile ukuphucula inkqubo yayo yeenkonzo zehlabathi ukwanelisa abathengi abafuna ukhathalelo kunye nokubonelela ngamava anzulu kubo. I-Foton igxile kwiimfuno zabathengi kumava kunye nokwenza iinkonzo ezibanzi, ezithwala iinkonzo ezenzelwe wena kunye nezobuchwephesha kubathengi.
Iziko loSasazo eliHlabathi liphela
qinisekisa ukuqhuba ngokugqibeleleyo
Lonke ukhathalelo lobomi ukuze kuqinisekiswe ukuqhuba okugqibeleleyo. Iinkonzo ezahlukeneyo ezongezwe ngexabiso zizisa ixabiso ngakumbi kubathengi, zibonisa ukhathalelo olunyanisekileyo lweFOTON. Ukubamba ungcelele lwempendulo kwisithuba esiqhelekileyo sokuqonda iimfuno zabathengi zokwenza uphuculo oluqhubekayo kunye nokulandela ukugqwesa.
Uvavanyo oluphambili kunye nezixhobo zokulungisa, yonke into ejikeleze isiqinisekiso sehardware; iqela elikhokelayo lenkonzo eliqulunqwe yinkqubo yoqeqesho enamandla kunye neengcali zeenkonzo zobungcali.
Inkqubo ekhokelayo kwihlabathi liphela ye-PMS, i-EPC, i-WMS, i-DMS kunye neCRM yolawulo oluhlanganisiweyo lwenqanaba le-3 lokubonelela ngezixhobo kunye ne-inventri (iziko lehlabathi, iziko lommandla kunye nesikhululo seenkonzo (iarhente ekhethekileyo), eqinisekisa ukuba imijelo yeendawo egudileyo. iphononongwe kwi-intanethi ngabathengi.
I-100% yamalungu ayinyani, ixabiso eliphantsi, ukugcina ixabiso lesithuthi; Ixabiso lezinto ezibonakalayo, iindleko zeeyure zomsebenzi kunye nenkqubo yokugcinwa; imigudu egudileyo yezikhalazo zabathengi.
INETWORK YENKONZO YAMAZWE NGAPHANDLE
Gubungela imimandla ephambili
I-FOTON iseke uthungelwano lwenkonzo yaphesheya eyakhiwe ziivenkile ezili-1,485 kumazwe angaphezu kwama-80 nakwimimandla, kubandakanya amaziko angama-168 amaziko olawulo lweenkonzo kunye ne-1,317 yenqanaba-2 labathengisi beenkonzo, kunye nenqanaba le-1 lokuthengisa abathengisi kunye ne-1,205 yenqanaba-2 Abathengisi beentengiso, begubungela imimandla ephambili eAsia, eMelika, eAfrika naseYurophu.
Umgaqo-nkqubo ophambili wenkonzo
Ukujolisa kulwaneliseko lwabathengi, i-FOTON isebenze umgaqo-nkqubo wenkonzo ophambili ukubonelela ngexesha elide kubathengi. Umgaqo-nkqubo wenkonzo uyahluka ngokweempawu, imigca yemveliso kunye neemodeli. Ngeenkcukacha zomgaqo-nkqubo wewaranti kunye nomgaqo-nkqubo onyanzelekileyo wewaranti, nceda ujonge incwadana yemiyalezo yomqhubi.
UQEQESHO LWEENKONZO ZAMANYE AMAZWE
yonke-ngeenxa uqeqesho lwenkonzo
I-FOTON ibeke amaziko oqeqesho ali-12 eThailand, eRashiya, eVietnam, eSaudi Arabia, eKenya, eCuba, ePeru, eChile, eIran, ePhilippines, eColombia naseAlgeria. I-FOTON ngoku ibonelela ngezifundo zoqeqesho kumazwe angaphezu kwe-100 nakwimimandla. I-FOTON ibonelela ababoneleli beenkonzo ngoqeqesho lwenkonzo ejikeleze amaziko oqeqesho kwihlabathi liphela. Amaziko oqeqesho abonelela ngoqeqesho kwizikhululo zeenkonzo ezintsha kulawulo lweenkonzo kunye neetekhnoloji zenkonzo ukunceda izikhululo zeenkonzo zikwazi ukuziqhelanisa neFOTON kunye nokubonelela ngeenkonzo ezingcono kubathengi.
Iqela ngoku lenziwe ngabahlohli abangama-30, abagubungela iilwimi ezingaphezulu kwe-20, kubandakanya isiNgesi, isiFrentshi, iSpanish, isiArabhu nesiRashiya. Amaziko oqeqesho abonelela ngoqeqesho kulawulo lweenkonzo, icandelo lolawulo lwamalungiselelo kunye nobunjineli benkonzo, ejolise ekuboneleleni umthengi ngamnye ngemfundo enye yokuyeka ubomi bonke.
Inombolo yeFowuni yeNkonzo yaBaxumi yeHlabathi
Bhalisa ukuze ufumane ulwazi ngemodeli oyithandayo
Iifoto ngokujonga nje Isicwangciso Izinto ezintsha Uzinzo Izicelo
Izithuthi zabakhweli Iilori zomsebenzi okhanyayo Iilori eziphakathi kunye nomsebenzi onzima ibhasi kunye nomqeqeshi
Bonisa ityala Ezemidlalo zeMoto Umboniso weemoto
Inkathalo Iyonke Izixhobo zeFoton EzeMali
qhagamshelana nathi Umsebenzi kunye nomsebenzi